तपाई को राशीफल (बुधबार २०७६ मंसिर ११) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस -
तपाई को राशीफल (बुधबार २०७६ मंसिर ११) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस
२०७६, ११ मंसिर बुधबार ०२:१६ November 27, 2019 clickonLeaveaComment on तपाई को राशीफल (बुधबार २०७६ मंसिर ११) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस
रमाइलो गर्न बाहिर जानेहरूको लागि सरासर खुशी र आनन्द मिल्नेछ। अरूले भनेको मानेर लगानी गरेमा आज आर्थिक घाटाको सम्भावना देखिन्छ। आफ्नो भाइ तपाईंको उद्धार गर्न आउनेछ। एक-अर्कालाई खुसी बनाउन सहयोग र समन्वयसंग काम गर्नु धेरै आवश्यक छ। सहयोग जीवनको मुख्य वसन्त हो भन्ने जान्नुहोस्। आज प्रेममा आफ्नो विवेक शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्। लेखक र मिडिया व्यक्तिहरूले राम्रो पहिचान बनाउने विषयमा सोच्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईंले गरेको स्वयंसेवक कार्यले तपाईंले सहयोग गर्नहरूलाई मात्र नभएर तर तपाईंले थप आफैलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न पनि मद्दत गर्नेछ। तपाईंको पुरानो साथी आउनेछ र आफ्नो जोडीसँग तपाईंले बिताएका पुराना सुन्दर सम्झनाहरुको सम्झना गराउन सक्छ।
तपाईंले परिस्थितिलाई जित्नु भयो भने पीर हराउनेछ। तपाईंले यसलाई साहसको पहिलो स्पर्शमा फुट्ने साबुनको फोकाजस्तो हो भनेर बुझ्ने सम्भावना छ। आर्थिकमा सुधार आउनाले तपाईंलाई अत्यावश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न सुविधा हुनेछ। सम्पूर्ण परिवारलाई समावेश गर्ने मनोरञ्जनमा धेरै मजा हुनेछ। प्रेममा कमी आउनुबाट बच्नको लागि हँसिलो र साहसी हुनुहोस्। सेवकहरू – सहकर्मी र सह-कामदारहरूको समस्यालाई छोड्नु सकिंदैन। तपाईंले आफ्नो वैवाहिक जीवन नीरस भएको पाउन सक्नुहुनेछ। केही खुशी मनाउनुहोस्।
आज विगतका नराम्रो निर्णयहरूले हताशा र मानसिक उथलपुथल उत्पन्न गर्नेछन् – तपाईं असहाय भएर अब के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न असमर्थ हुन सक्नुहुनेछ – अरूबाट मद्दत माग्नुहोस्। तपाईंले आज राम्रो पैसा कमाउनुहुनेछ – तर यसलाई आफ्नो हातबाट खस्न नदिने प्रयास गर्नुहोस्। कुनै विदेशी आफन्तको उपहारले तपाईंलाई खुसी बनाउनेछ। तपाईंले आफ्नो जीवन भन्दा बढी तपाईंलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति भेट्नु हुनेछ। कला र थिएटरसँग जोडिएकाहरूले आफ्नो रचनात्मक कार्यलाई श्रेष्ठता दिनको लागि धेरै नयाँ अवसर पाउनुहुनेछ। तपाईंलाईले आफ्नो जोडीसित पुराना रमाइला रोमान्टिक दिनहरूको आज फेरि कदर गर्नु हुनेछ।
उदास र निराश नहुनुहोस्। तपाईंको ज्ञानको तिर्खाले नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। तपाईंले स्पष्ट समझद्वारा मात्रै आफ्नी श्रीमतीलाई भावनात्मक सहयोग दिन सक्नुहुन्छ। आज आराम गर्नको लागि केही समय पाउनुहुनेछ – तर बाँकी रहेका कामले तपाईंलाई बस्न दिनेछैन। तपाईंलाई पाएर तपाईंको जोडी आफैंलाई भाग्यमानी मान्छ जस्तो लाग्छ। आज यस क्षणको राम्रो उपयोग गर्नुहोस्।
परिवारको चिकित्सा खर्चमा भएको वृद्धि हटाउन सकिंदैन। बच्चाहरुले तपाईंलाई घरेलू काम पूरा गर्न मद्दत गर्नेछन्। रोमान्स सुखद र अत्यधिक रोमाञ्चक हुनेछ। काममा निरन्तर परिवर्तनबाट तपाईंलाई लाभ हुनेछ। तपाईंको जोडीले प्रारम्भिक चरणका प्रेम र रोमान्सको रिविन्ड बटन दबाउनेछ।
विशेष गरेर हृदयरोगीहरूले कफी नलिनुहोस्। तपाईंको आकर्षण र व्यक्तित्वले केही नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। महत्वपूर्ण मान्छेसँग अन्तरक्रिया गर्नाले तपाईंलाई राम्रो विचार र योजना ल्याउनेछ। व्यक्तिगत दूरी वैवाहिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर आज तपाईंहरू एक-अर्कामा नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस्। रोमान्स चरममा छ!
निराशावादी मनोवृत्तिबाट बच्नुपर्छ किनभने यसले तपाईंका सम्भावनाहरूलाई कम मात्र गर्दैन, शरीरको सामंजस्यमा पनि बाधा गर्नेछ। घरमा पारम्परिक कार्यहरू गरिनेछ। तपाईंसँग बिताएको राम्रो समयको याद दिलाएर आफ्नो मित्रताको नवीकरण गर्ने समय। तपाईंले नयाँ व्यापार साझेदारीको विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने – त्यसपछि तपाईंले कुनै पनि प्रतिबद्धता गर्नु अघि हातमा सबै तथ्य प्राप्त गर्नु आवश्यक हुनेछ। तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन? आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
तपाईंको मनलाई अनावश्यक विचारहरूले कब्जा गर्न सक्छन्। खाली मस्तिष्क शैतानको कार्यशाला हुने हुनाले शारीरिक व्यायामहरूमा आफूलाई संलग्न गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। आज सामाजिक कार्यहरुमा उपस्थित हुने मौका पाउन सक्नुहुन्छ- जसले गर्दा तपाईं प्रभावशाली मान्छेको सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। काम दबाब बढ्नाले मानसिक उथलपुथल र कोलाहल। दिनको उत्तरार्द्धमा आराम मिल्नेछ। यदि तपाईंले लामो समयदेखि काममा कसैसँग कुरा गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ भने, आज तपाईं भाग्यशाली हुन सक्नु हुनेछ। आफ्नो जोडीले दिएको तनाउले गर्दा तपाईंको स्वास्थ्य नराम्रो हुन सक्छ।
आफ्नो शारीरिक तन्दुरूस्ती कायम गर्नको लागि तपाईंले आज केही खेल गतिविधिहरूको आनन्द लिने सम्भावना छ। जवानहरू संलग्न भएका गतिविधिहरुमा संलग्न हुने राम्रो समय हो। रोमान्सको लागि धेरै राम्रो दिन होइन किनकि तपाईंले साँचो प्रेम पाउन सक्नु हुनेछैन। यदि तपाईं अनुभवी मान्छेको कम्पनीमा केही समय बिताउनुभयो भने, तपाईंलाई ज्ञान हासिल हुनेछ। तपाईंको मनमा भएको कुरा भन्न नडराउनुहोस्। एउटा विनोदी छलफलमा पुरानो मुद्दा उठ्न सक्छ र यसले तपाईं दुई बीच तर्क उत्पन्न गर्दछ।
आशावादी भएर उज्यालो पक्षतर्फ हेर्नुहोस्। तपाईंको विश्वस्त आशाले तपाईंको इच्छा र चाहनाको बोधका लागि ढोका खोल्नेछ। तपाईंले प्रेम गर्नेहरूलाई उपहार दिने र उनीहरूबाट प्राप्त गर्ने शुभ दिन। तपाईंले एउटा मायालु र समझदार मित्र भेट्नु हुनेछ। तपाईंको जोडीको सामना गर्न कठिन हुनेछ। के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। लगानीको लागि सिफारिस गरिन्छ तर उचित सल्लाह लिनु आवश्यक छ। अरूलाई प्रभावित गर्ने तपाईंको क्षमताले फाइदा पुर्याउनेछ। आफ्नो रोमान्टिक दृश्य प्रसारित हुन नदिनुहोस्। “आज तपाईंले प्राप्त गरेको ज्ञानले साथीहरूसँग सामना गर्न तपाईंलाई सहारा दिन सक्छ।” तपाईंको सञ्चार प्रविधी र काम कौशल प्रभावशाली हुनेछ। केही विशेष आश्चर्य गरेर तपाईंको जीवनसाथीले तपाईंलाई नराम्रो मुडबाट छुटकारा दिलाउनेछ।
आजको मनोरञ्जनमा खेल गतिविधिहरु र घर बाहिरका कार्यहरू समावेश हुनुपर्छ। तपाईंले धेरै नभेट्ने मान्छेसँग कुराकानी गर्न राम्रो दिन। तपाईँले कति सुन्दर काम गर्नुभएको छ भन्ने देखाउन आज तपाईंको प्रेम फूल्नेछ। काममा र घरमा हुने दबावले तपाईंलाई रिसाहा बनाउन सक्छ। पर्यटन र यात्राले खुशी ल्याउनेछ र अत्यधिक ज्ञानवर्धक हुनेछ। विवाह यौनको लागि मात्रै हो भनेर भन्नेहरूले ढाँट्छन्। किनभने, आज तपाईंलाई साँचो प्रेम के हो भन्ने थाहा हुनेछ।
गणेश पूजनको लागि बुधवार विशेष दिन,यसप्रकार गरौ पुजा
विप्लव निकट ६ जना विद्यार्थी प्रहरीको नियन्त्रणमा
२०७६, ३ आश्विन शुक्रबार ००:४७ September 20, 2019 clickon
तपाई को राशीफल (शनिबार २०७६ मंसिर २१) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस
२०७६, २१ मंसिर शनिबार ०४:१८ December 7, 2019 clickon
तपाईंको आजको राशीफल (बिहिबार २०७६ भाद्र १२) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय
२०७६, १२ भाद्र बिहीबार ००:२४ August 29, 2019 clickon